I-Beef Corned kanye neKlabishi Slow Cooker Recipe (Ividiyo) - Ungadliwa
I-lasagna roll up ne-cottage shizi iresiphi
iresiphi ye-turkey pot pie crock pot
koze kube nini ukubilisa imilenze namathanga enkukhu
I-Beef Corned kanye neKlabishi Slow Cooker Recipe (Ividiyo)
Lokhu Iresiphi yeCorned Beef and Cabbage Slow Cooker upakisha konke ukunambitheka kwenyama yenkomo ekhonjiwe esidlweni esiziphekayo. I-Tender Corned Beef kanye neklabishi, izaqathe, namazambane konke okuphekwe ekupheleleni ku-Crock Pot kwenza isidlo esingenamsebenzi.
Khuluma ngokushaywa inhlanhla ngoSuku lwePatrick noma nganoma yiluphi usuku lonyaka!
Iresiphi Engcono Kakhulu Yenyama Yenkomo Neklabishi!
Ngivame ukubuzwa ukuthi 'Iyiphi iresiphi engcono kakhulu yenkomo yenkomo neklabishi?' futhi kufanele ngivume ukuthi ngiyayikhetha le iresiphi yokupheka kancane!
Lokhu Iresiphi ye-Crock Pot Corned Beef & Iklabishi iphekwe kahle ku I-6QT cooker slow (noma enkulu) njengoba igcwalisa ngempela i-crock. Faka amazambane akho amahora ambalwa kunqubo yokupheka, ukuze apheke cishe amahora angama-5-6, lokhu kuzobavimba ekutholeni ama-mushy. Faka iklabishi amahora amabili ngaphambi kokuhlela ukudla.
Uma ungakaze wenze inyama yenkomo ekhonjiwe phambilini, empeleni kulula ukuyenza kepha kubalulekile ukukhumbula, inyama yenkomo ekhonjiwe (kanye nenyama yenkomo ngokujwayelekile) ukusikwa okunzima kwenyama ize iphekwe kahle. Uma ilukhuni, imane nje ingaphekanga isikhathi esanele, yishiye kumpheki ohamba kancane bese uyinika isikhathi esithe xaxa.
Ngaphambi kokusika uzohlala ufuna ukuvumela inyama yakho yenkomo ephekiwe ukuba iphumule njengoba lokhu kuyimfihlo yokusikwa okukhulu kwenyama. Uma usuphumulile, uthathe okusanhlamvu ukuletha inyama yenkomo ekhonjiwe eyijusier, ithenda yemfoloko nokunambitheka kakhudlwana ..
Kunezeluleko ezimbalwa ezibaluleke kakhulu okudingeka wazi lapho wenza noma iyiphi iresiphi yesifuba (kufaka phakathi le iresiphi yenkomo yenkomo yenkomo).
Ungayipheka Kanjani Inyama Yenkomo Ukuze Uyenze Ithenda
Phansi & Slow: I-Brisket iyisikhumba esinzima senyama futhi ukuthola imiphumela emihle kakhulu, kufanele iphekwe iphansi futhi iphuze kancane. Kulesi iresiphi, ngisebenzisa i-cooker ehamba kancane futhi ngiyaqiniseka ukuthi ngisebenzisa isethingi ephansi.
Inike isikhathi: Lokhu kubuyela emuva 'kancane' ... le iresiphi idinga amahora ayi-8-10 futhi imayini ivame ukusondela ku-10. Uma inyama yakho yenkomo eqinile ikhuni, kunethuba elihle lokuthi ayiphekanga isikhathi esanele.
Phumula inyama yakho: Njengakwezinyama eziningi, vumela ukuthi iphumule imizuzu embalwa ngaphambi kokusikwa.
Sika unhlamvana: I-brisket inemicu emide enemicu ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukusika okusanhlamvu. Eqinisweni, lokhu kungenye yezingxenye ezibaluleke kakhulu zale recipe !!
Yiziphi izinongo eziya enkomeni yenkomo?
Inkabi ekhonjiwe yenkomo yenkomo elashwe futhi yahlanzwa. Lapho ithengiswa ivame ukufika isivele inongwe noma iphakethe lokunandisa. Izinongo zifaka izinongo ezinuka kamnandi njenge-allspice yonke, ama-peppercorns, imbewu yesinaphi, i-coriander ukubala ezimbalwa. Uma inyama yakho yenkomo ekhonjiwe ingenazo izinongo ungangeza izipuni ezimbalwa ukukha izinongo , ama-peppercorns ambalwa neqabunga le-bay. Hlanganisa ku-cheesecloth bese uwaphonsa kumpheki ophuthumayo.
Usuku lukaSt. Patrick yisikhathi esikahle sokujabulela iresiphi yokupheka ephuza kalula efana neCorned Beef neCabbage. Ukusebenzisa imbiza yokosa kwenza lesi sidlo singabi namandla!
Lokhu Iresiphi yenkomo yenkomo yenkomo yenkomo yenkomo kanye neklabishi kwakha ukudla okunomusa, okumnandi umndeni wakho ozokuthanda! Njengoba sekuvele ukudla okuphelele, sivame ukukuphaka nakho Ama-Rolls Esidlo Sasemini angama-30 noma ama-Easy Homemade Buttermilk Biscuits kanye nesaladi eseceleni elula.
Nginomuzwa ofuna ukuwenza kulo nyaka wonke! Le iresiphi yenkomo neklabishi elula ekhonjiwe iqukethe ukudla okuphelele konke okukodwa, inyama yenkomo ethambile, amazambane, izaqathe ezimnandi neklabishi.
Izintandokazi eziningi zase-Ireland
I-Lamb Stew (i-Irish Stew) - Ecebile futhi enambitheka kangaka!
Ungayipheka Kanjani Inyama Yenkomo (Phezulu Kwesitofu) - Isitofu inguqulo ephezulu!
Isinkwa se-Irish Soda - Uhlangothi oluphelele, olukhulu isobho kanye nesitshulu!
IColcannon Recipe (Iklabishi Namazambane) - The wokugcina induduzo ukudla!
Isandwich Engiyithandayo KaRuben - Ukuzenzela kungcono!
I-Slow Cooker Corned Beef neKlabishi
Isikhathi sokulungiselela10 imizuzu Isikhathi Sokupheka8 amahora Isikhathi Esiphelele8 amahora 10 imizuzu Izinkonzo6 izinsizakalo UmbhaliUHolly N. Le iresiphi yenkomo yenkomo kanye neklabishi Slow Cooker ifaka konke ukunambitheka kwenkomo yenkomo ibe yisidlo esiziphekayo. Khuluma ngokushaywa inhlanhla ngoSuku lwePatrick noma nganoma yiluphi usuku lonyaka!
▢1 Inyama yenkomo ekhonjiwe 3-4 amakhilogremu
▢3 ama-clove ugaliki
▢ezimbili amaqabunga e-bay
▢2 ½ - 3 izinkomishi amanzi
▢ezimbili amakhilogremu amazambane kuhlutshiwe futhi kuhlukaniswe
▢ezimbili izaqathe ezinkulu oqoshiwe
▢1 ikhanda elincane leklabishi uthathe ama-wedge
Qoba u-anyanisi ube yiziqu ezinkulu bese ubeka ezansi kokupheka okungu-6 qt. Phezulu ngephakethe yenkomo yenkomo nephunga lonyaka.
Thela amanzi kumpheki ophuzayo kuze kube yilapho umboza inyama yenkomo ekhonjiwe. Faka ugarlic namaqabunga e-bay.
Pheka ngamahora aphansi ayi-8-10.
Ngemuva kwamahora amathathu okuqala, engeza amazambane kanye nezaqathe kumpheki ophuthumayo.
Emahoreni amabili ngaphambi kokuphaka, engeza amakhabishi eklabishi kumpheki ophuthumayo.
Susa inyama yenkomo ekhonjiwe kumpheki ohamba kancane bese uvumela ukuphumula imizuzu engu-15 ngaphambi kokusikwa. Khonza ngamazambane, izaqathe kanye neklabishi.
Uma sekuphekiwe inyama yakho yenkomo ekhonjiwe kufanele ibe nethenda (imayini ivame ukupheka eduze nesikhathi sehora eli-10). Izinto zokusebenza zingahluka, uma inyama yenkomo yakho engamakhoneni ingeyona ithenda, kungenzeka ukuthi idinga ukupheka isikhathi eside. Kubalulekile ukusika inyama yakho yenkomo ngaphesheya kokusanhlamvu. Imininingwane yokudla okunikeziwe ilinganiselwa futhi iyohluka ngokuya ngezindlela zokupheka kanye nemikhiqizo yezithako ezisetshenzisiwe.
Amakholori:592,Amakhabhohayidrethi:32g,Amaprotheni:39g,Amafutha:3. 4g,Amafutha agcwalisiwe:10g,Cholesterol:122mg,I-Sodium:2817mg,Potassium:1653mg,Umucu:8g,Ushukela:6g,Uvithamini A:3545IU,Uvithamini C:136.9mg,I-calcium:135mg,Insimbi:9.5mg
Igama elingukhiyeyenkomo kanye neklabishi ekhonjiwe InkamboIsidlo sakusihlwa KuphekiweWaseMelika© SpendWithPennies.com. Okuqukethwe nezithombe kuvikelwe i-copyright. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa futhi kuyaziswa. Ukukopisha kanye / noma ukunamathisela izindlela zokupheka ezigcwele kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana akuvunyelwe nakancane. Sicela ubuke inqubomgomo yami yokusebenzisa izithombe lapha .
REPIN le Slow Cooker Recipe
Izilayida zakwaRuben Sandwich
Izitayela ze-Irish Pub Nachos